Kedu ka m ga esi echetara onwe m ka m rie nri? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ngwa nke na-echetara gị ka ị rie - azịza dị irè
Ngwa nke na-echetara gị ka ị rie - azịza dị irè
Kedu ka m ga esi echetara onwe m ka m rie nri?
Isiokwu a depụtara ụzọ dị mfe 16 iji mee ka agụụ na-agụ gị.
RieObere nriỌzọUgboro. Kekọrịta na Pinterest
RieNri Na-edozi Ahụ.
TinyeỌzọCalori ka nri gi.
Mee Ka Oge Nri bụrụ Ọrụ Na-atọ Socialtọ.
Mee Ka Brabụrụ Gị Dị Iche Iche.
Hazie Oge Nri.
Echela nri ụtụtụ.
Onye ntụgharị okwu: Maurício Kakuei Tanaka Onye nyocha: Adam Fitzgerald Nwanne m nwoke nke obere amachagoro ihe ụfọdụ site na nwata. Ihe mbụ ọ maara nke ọma bụ ime ka mmadụ niile chịa ọchị n’agbalịghị. Dị ka m gwara ya otu oge ka o nwee protein mgbe ọ gachara mgbatị ahụ.
Obi dị ya ụtọ n'ihi na ọ chere na m kwuru 'poutine'. (Ọchị) Ihe nke abụọ ọ masịrị ya bụ iri ọtụtụ ndị okenye nọ na tebụl. Dị ka ị nwere ike iche, dị ka nwatakịrị ụkwụ isii, enwere n'ezie ọghọm dị na iri ụmụ nwoke toro eto mgbe niile.
Mgbe m dị naanị afọ iri na otu, achọpụtara m na, ọ bụrụ na ọ nweghị ihe gbanwere, nwanne m nwoke nke nwoke na-aga ibi ndụ oge ntorobịa jupụtara na njakịrị na nri na-adịghị mma. Dịka nwanne nwoke nwoke nke okenye, achọrọ m ime ihe banyere ya, ama m na m ga-eme ihe gbasara ya. Na mbido amachaghị m etu m ga - esi mee ya, mana ekpebiri m ịchọ ụzọ.
Ugbu a, na ọnwa Machị 2013, agbajiri m ụkwụ n’ụzọ m na-aga klasị ma sụọ n’elu ice. Ee, nke ahụ bụ akụkọ ahụ dum. E nwere ụfọdụ ice na-agba ọsọ.
Poof, agbajiri agbaji. Enweghị ndụ azọpụta. Ọ dịghị obere akpa azụ.
Ọ bụghị akụkọ dị mma ịkọ. Amaghị m ka m dina na ọdọ mmiri ice na-agbaze ngwa ngwa na-eche ka ụgbọ ala ahụ rute. Oge ahụ ga-agbanwe ndụ nwanne m nwoke nwoke ndụ ebighi ebi.
Mgbe a wasịrị m anya ịtinye obere efere titanium na ihe nkedo ụfọdụ na eriri m, e nyere m osisi abụọ ma gwa m ka m ghara itinye ihe ọ bụla n'ụkwụ m ruo ọnwa abụọ. Nke a gosipụtara nsogbu pụrụ iche ebe ọ bụ na otutu snow na ice dị n’elu ala. Enwere m ọnwa abụọ ọzọ nke klas gbasaa n'otu ụlọ akwụkwọ kachasị ukwuu na mba ahụ, mkpebi nwa akwụkwọ ọ bụla na-arụsi ọrụ ike na ọnọdụ m ga-eme.
O doro m anya na ekpebiela m ịghara ịga klas ọzọ. (Ọchị) Ugbu a, tinyere oge niile ahụ m nwere na stu Mgbe m nwụrụ n'ụlọ, emechara m chọpụta etu m ga-esi nyere nwanne m nwoke aka. Amaara m na ihe ọ ga-eme dị mfe na tiori, mana ọ na-esiri ike na omume.
Ọ ghaghị ịgbanwe otú o si eri nri. Amatara m site n'ahụmahụ ihe ọ ga-agbanwe na ihe na-agaghị agbanwe. Nsogbu bụ na ikwurịta okwu site n'aka onye ọzọ ga-abụrịrị dịka ịkpọ ekwentị na nwata.
Ozi a gafere, na obere nghotahie na nghotahie n'uzo.
Ọ bụghị ọtụtụ ihe fọdụrụ na ozi izizi na onye ọ bụla nwere mgbagwoju anya. Otú nwanne m nwoke si eri nri agbanwebeghịkwa. N’iburu nke ahụ n’uche, emere m otu n’ime mkpebi kacha mma ná ndụ m, ekpebiri m ịlaghachi ụlọ n’ime izu abụọ na-abịanụ ma kwadebe nri ọ bụla nwanne m nwoke nke ọ bụla ga-eri, na-akụziri ya banyere ezigbo nri na-edozi ahụ.
Mgbe m nọ n'ụlọ, na kichin, ọ na-abụkarị ihe na-eme m ihere na-emegharịgharị n'obe osisi abụọ, ite ọkụ, na mma dị nkọ. Ọ dịrịghị ya mfe. Ekwesịrị m ime obere nkwụsịtụ na minit ole na ole iji gbochie ọzịza nkwonkwo ụkwụ m ịbụ nke a na-apụghị ịnagide.
Ugbu a ka nanị izu abụọ gachara, nsonaazụ ya abughi naanị ihe dị ịtụnanya, mana nsonaazụ nke atụmatụ onye ọ bụla nwere ike iji. Ihe mere anyị jiri hụ nsonaazụ dị egwu na nke ọma, nke m ga-achọ ịkọrọ gị ma emechaa, bụ na anyị agbanweela gburugburu ya ka ọ daba n'ihe o kpebiri. Anyị na-ekwe ka gburugburu ya rụọ ọrụ maka ya ma ghara imegide ya.
Nanị nke a pụtara iji dochie nhọrọ ọjọọ ọ bụla na ndị nwere ahụike. Ngbanwe a kwụ ọtọ mere ka anyị nwee ike ịgbanwe nri ya na American Standard Diet, n'ụzọ na-enweghị isi site na mkpụmkpụ SAD ya, na-edozi ahụ na-edozi ahụ na-enweghị nsogbu. N'ihi atụmatụ a, nke a abụghị obere ihe siri ike.
Mgbe ị wepụrụ nhọrọ na-adịghị mma, iri nri dị mma ma na-edozi ahụ na-abụ atụmatụ Plan A na Atụmatụ B. Ihe pụrụ iche gbasara ngwọta a bụ na ọ na-ewe ike iji aka ya pụọ ​​na nha anya. Naanị, ọ bụrụ na ịnọghị ebe ahụ, ị ​​gaghị eri ya.
Ihe mgbakwunye agbakwunyere na atụmatụ a bụ, ọ bụrụ na enweghị mpempe akwụkwọ ọ bụla na tebụl na-akpọ aha gị, ọ ga-abụ na ị ga-echefu ha ma mee ka ị ghara inwe mmetụta kpamkpam na mberede. Obere ụbụrụ mgbochi. Nke a nwere ike ịdị gị ntakịrị mfe ịbụ eziokwu, mana a na m ekwenye gị na ọ bụghị, mgbe ị wepụrụ ihe mgbochi maka ihe ịga nke ọma gị - n'ihe gbasara nwanne m nwoke, nri na-adịghị mma - ma ị dochie ma ọ bụ meghee ụzọ ahụ, nweta ụzọ ịga nke ọma na-aghọ nke dị nro karịa.
Yabụ, dozie gburugburu gị ka ọ rụọrọ gị ọrụ kama imegide gị. Nke a na-arụ ọrụ nke ọma maka ebumnuche ọ bụla. Maka nwanne m nwoke, abụ m gburugburu ebe obibi.
Emere m ya nri ya niile, nye ya nri kwesịrị ekwesị, ma zaa ajụjụ ya niile. Ma olee otú ọ gaara adị ma a sị na anọghị m, oleekwa otú ị ga-esi rụọrọ gị ọrụ a? Ọfọn, ka ihe ịga nke ọma, ị ga-eme mkpebi siri ike. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị banyere n'ọnụ ụlọ ogologo na n'aka ekpe nke tebụl ndị ahụ enwere kuki na-atọ ụtọ chọkọletị, akụkụ na ihe ọ bụla masịrị gị.
N'aka nri bụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ, agba agba, mara mma nke ọma, ha dị nkọ ma na-atọ ụtọ. Been nọ ebe a ruo awa abụọ ka agụụ na-agụ gị, nhọrọ bụ nke gị. Should kwesiri ịhọrọ nhọrọ A n'aka ekpe, ka ị ga - ahọrọ broccoli na - edozi ahụ, na - edozi ahụ n'aka nri? N'iburu ọnọdụ a, ọ ga-esiri ọtụtụ n'ime anyị ike imeri ọnwụnwa nke ịhọrọ A.
Nke a bụ ọnọdụ dị adị n’ezie na-eme oge niile, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa, yabụ ka ị na-ewepụ ihe mgbochi na ihe ịga nke ọma gị, ọ ga-eme ka ọ dịrị gị mfe karịa ka ị ghara ịme mkpebi ahụ siri ike na nke mbụ . Nke a bụ otu ị ga - esi jiri atụmatụ a maka Kwe ka onwe gị rụọ ọrụ. Malite site na ịchọpụta ihe nri gị na-ebute ma na-ekwe nkwa ịghara ịrapara na ha mgbe oge ruru, emeelarị mkpebi ahụ maka gị.
Ọfọn, nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike iri nri ndị a ọzọ. Ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ, ịnwere ike ịga ụlọ ahịa ma zụta otu, ma ọ bụ ịnwere ike idobe ya ka ị nwee naanị n'oge pụrụ iche dịka nke a. Naanị edobela ihe n'okpuru ụlọ gị ebe ị maara na ha ga-abụ nsogbu nye gị ka ị na-eme ka gburugburu ebe obibi rụọ ọrụ maka gị karịa imegide gị.
Nke a bụ otu ị si eme ka iri nri dị mma na ọkọlọtọ, belụsọ otu. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ebumnuche nke gị iri nri nke ọma karị, laa n'ụlọ, chọta nri nri ratụ ratụ gị na onye agbata obi ị na-anaghị amasịkarị, ma nye ha niile. Ntọala nke atụmatụ a rụụrụ obere nwanne m nwoke 11 afọ, ọ ga-arụkwara gị ọrụ.
Iji mechie, ka m kọọrọ gị nsonaazụ ikpeazụ nke ndụ nwanne m nwoke nke obere. Ọzọkwa, ka m kwuo na enwere m otu isi iwu m chọrọ ịgbaso chan; ọ dịghị mgbe m chọrọ ka nwanne m nwoke dị afọ 11 nwee agụụ ma ọ bụ bụrụ onye a napụrụ ihe. Nke ahụ bụ otu o si arụ ọrụ.
kilomita ole ka onye na-agba ịnyịnya ígwè na-agba kwa afọ
Mgbe ụbọchị asaa mbụ gasịrị, pound ise efuola ya. Mgbe izu nke abụọ gasịrị, ọ dị kilogram asatọ, mana ọ kwụsịghị ebe ahụ. Alaghachiri m ile ule ma ogha n'ihu.
Mgbe ụbọchị iri abụọ gachara, ọ dị paụnd iri, ma mgbe mkpụrụ ụbọchị iri atọ na isii gasịrị, ọkara ọkara kilogram na-efunahụ ya kwa ụbọchị, tinye ya na mkpokọta na paụnd 18. (Aka) Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arụrụ onwe ya ọrụ kama imegide ha, ihe ịga nke ọma nwanne m nwoke ga-abụkarị ụkpụrụ. Olileanya m bụ na otu ụbọchị ọ ga-adị.
Daalụ. (Ịkụ aka)
Apple Watch nwere ike ichetara gị ka ị rie?
Oge Hour 3Ihe ncheta na-echetara gịọ bụla 3 awa na-riema na-edekọ nri olegị'narieụbọchị ahụ na ebumnuche nri gị. Oge Hour 3Nchetana-edekwa ole iko mmiri dịgị'A drankụrụma ụbọchị dum iji jide n'akagịiru ihe mgbaru ọsọ gị. Banye nri gị naapụlNgwa Ahụike.
Kedu ihe ịchọrọ Apple Watch? Gini mere iji mefu ego buru ibu na igwe onyonyo? Enweela m ekwentị nke nwere ike ime otu ihe ahụ. Ihe ndị a niile bụ ihe m na-anụ na Apple Watch. Aga m ekerịta ha na My Top 10 apụl na-ekiri na ndụ kwa ụbọchị. hi tech guys, nno nke oma.
Y’oburu na ohuru ebe a aha m bu Craig. Enwere m mmasị na teknụzụ ma hụ ihe ọ nwere ike imere anyị. Ọ bụrụ na nke ahụ dị ka ihe masịrị gị, rapara ya nso.
Achọrọ m ime isiokwu a n'ihi na enwere ọtụtụ echiche dị iche iche banyere Apple Watch. O nwere ndị hụrụ ha n'anya, nwekwa ndị kpọrọ ha asị, ma nwekwaa ndị, dịka m na-echeburu, na-eche na ọ dị mma na nke a bụ otu n'ime ngwaọrụ Apple kachasị dị mkpa. Enwetaghị m ya.
Ka m na-ejikwa nke m, etu ahụ ka m na-ahụkwu uru. Ka anyị leba anya na ngwa ngwa 10 kwa ụbọchị na-agụta ọnụ ọgụgụ kachasị amasị m otu. Nọmba 10 ga-abụ emetụ aka.
Chei, tọọ oge maka nkeji iri - nkeji iri ma gbakọọ - Ziga Cheryl ozi ederede - Gini ka ichoro ikwu? - Ule nyocha na Apple Watch maka otu isiokwu. - Ọ dị mma, Aga m eziga ya. - Mgbe ụfọdụ ọ na-adaba adaba iji ụda olu gị.
Site na ọgbọ ọhụụ nke Apple Watch, bulie nkwojiaka gị wee bido ikwu okwu. Nke a dị mma maka ijikwa ụlọ smart, texting, na ndị ọzọ. Maka ọgbọ niile, ị nwere ike pịa bọtịnụ n'akụkụ ahụ ma gwa Siri okwu.
Chetara m ka m biputere m isiokwu echi na 8: 00 am- Emela.- Ebe ọ bụ na m nwere mmasị na smart n'ụlọ technology, a smart home njikwa dị ukwuu.
Hey, office off - office off na-abịa n'oge na-adịghị anya - ọnụọgụ itoolu ga-etinye oge. Achọpụtara m na m na-eji ngụ oge niile oge. M na-eji ha echetara onwe m na m nwere ike ime ihe ndị dị ka ịdọpụta uwe, ebe a na-esi nri, ma ọ bụ mgbe m na-aga ebe ọzọ.
Nwere ike iji olu gị, ịnwere ike ịbanye na ngwa ngụ oge, ma ọ bụ tinye ihe mgbagwoju anya na ihu elekere gị iji nweta ngwa ngwa. Maka ndị gị na amaghị ihe esemokwu, ha bụ akara ngosi maka ngwa ị nwere ike itinye na nche. Facesfọdụ nche ihu anaghị enwe nsogbu ma ọ bụ ole na ole.
Ndị ọzọ dịka nke m na-eji ụfọdụ. Ihu a na-enye aka nke ukwuu n'iweta ngwa ndị m na-eji ọtụtụ. Nọmba asatọ bụ kaadị.
Map ndị dị na nche nwere ike ịbụ ebumnuche abụọ, nke mbụ, mgbe ịtọziri maapụ na ekwentị gị, ọ ga-egosi gị ụzọ dị na ihu elekere. Ọ na-egosikwa gị mgbe a na-agbanye mgbanaka na mgbata mmiri ma ọ bụ ịma jijiji na nkwojiaka. Nke a dị mma maka iji ekwentị gị setịpụ ụzọ wee tinye ekwentị n'akpa gị.
Secondzọ nke abụọ e si eji elekere bụ ime nchọta na elekere. Nwere ike mepee Maps ngwa, mee ọchụchọ, chọgharịa ọkacha mmasị gị, wee hụ ebe kachasị ọhụrụ gị nwere ike iji olu gị na Siri weta Mapsis. Ntuziaka na Storelọ Ahịa Apple - Kedu Storelọ Ahịa Apple? - Ana m agwa gị na iji olu dị na nche dị mma.
Number asaa na-eji ha maka email. Apple Watch dị mma maka ịnweta ọkwa. Ọ na-amasiri m ike ịhụ ozi ịntanetị m n'otu elere anya iji hụ ma ọ bụ ihe m chọrọ o na-arụ ọrụ.
Ugboro ole ka ị hụtụrụla na ekwentị gị na-ama jijiji ma dọpụta ekwentị gị ka ọ mara ihe ọ bụ? Nke a na - eme ka ọ dị mfe ileba aka gị ma kpebie ma ị ga - emeso ya ma ọ bụ hichapụ ya. I nwekwara ike ịzaghachi ozi ịntanetị ozugbo na ngwa ngwa Mail na nche. Onwe m, Achọghị m ịma nke ukwuu, mana ọ bụ nhọrọ iji chọpụta.
Nke a adịghị na ndepụta m ebe ọ bụ na agbakwunye ya na ngwa niile dị iche iche, mana Apple Watch dị mma maka ịlele ọkwa sitere na ngwa gị. Ga-enweta amamọkwa maka ozi ịntanetị, ozi, kalenda ihe na ndị ọzọ. Notma ọkwa ga-i copyomi gị ekwentị ificationsma Ọkwa gwụla ma ị na-agbanwe elekere ntọala.
Aga m ekwu, n'ụzọ ọ bụla gbanyụọ ọkwa ị na-achọghị ịhụ ma ọ bụ na ọ nwere ike iwe. Yiri ka ịnwe ọtụtụ ọkwa na ekwentị gị. Nọmba isii bụ oku ekwentị.
Mgbe AirPod m ejikọtaghị na elekere m, enweghị m mmasị inwe mkparịta ụka zuru oke na elekere m, mana echere m na ọ dị mma mgbe m na-eme ihe na ekwentị ma achọghị ịnwa ịwepụ. ekwentị m. Nwunye m kpọrọ m ọtụtụ ugboro mgbe m na-asa efere ma ọ bụ ihe ọzọ achọghị m imetụ ekwentị m aka. Ana m eme nke ahụ na elekere ebe ị gbalịrị imetụ ya aka ka ihuenyo ahụ ghara ide mmiri.
Know ma na obere slide ahụ gị na nkwonkwo mkpịsị gị ka m nwee ike ịkpọ oku. Were nọ ebe ahụ, ị ​​maara ihe m na-ekwu. Ma eleghị anya, ọ bụghị na nche ma ị mere ya na ekwentị gị.
igwe eletriki igwe eletrik eletrik 2017
Ekwentị na-akụ nọmba nke ise bụ ihe ncheta.
M na-echetara m ọtụtụ ihe iji na-edekọ ihe m kwesịrị ime. Ntuziaka ike ebe a, enwere m ndepụta ịzụ ahịa- Emepụtara ncheta iji kọọrọ nwunye m. Ugbu a, mụ na nwunye m nwere ike itinye ihe na ndepụta ebe nchekwa dị ka anyị siri chee.
Yabụ enweghị mgbaghara ọ bụla agaghị etinye ihe ịchọrọ site na ụlọ ahịa na ndepụta ịzụ ahịa. Mgbe ahụ, m na-eji ụgbọ ahịa m aga ahịa, jiri Apple Watch m, na-akọrọ ihe ndị dị na ndepụta ahụ ka m na-aga. N'ezie kemfe na ngwa ncheta.
Nọmba nke anọ bụ kalenda. Ndụ nwere ike iji ọrụ n'aka, ọkachasị mgbe ị nwere ụmụaka na mmemme ha niile. Ọ dị mma inwe ike ileda ala lee ihe na-esote na kalenda m.
N'oge ahụ m na-ahụ na ọ bụ 3:00 pm. Tenis ụlọ akwụkwọ sekọndrị maka nwa m nwanyị ma ọ bụ jiri kalenda iji nweta ọkwa mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ kpọọ oku ahụ ma ọ bụ gaa nhọpụta ahụ.
Nọmba atọ bụ nnukwu nsogbu nye m ụbọchị a ma ọfụma na ọnụọgụ abụọ. Ọ na-enwe ike ịnụ ntị pọdkastị, akwụkwọ ọdịyo ma ọ bụ egwu. Mgbe ijikọ ekweisi Bluetooth ma ọ bụ ntị ntị, ịnwere ike ịnụ ọdịyo site na nche.
Enwere m ike ibudata akwụkwọ ọdịyo na Audible, listi egwu Apple Music m, ma ọ bụ otu pọdkastị kachasị amasị m. Ugbu a, ekwesighi m ijikọ ekwentị m maka ihe ndị a niile. Ọ bụrụ n’inwere mkpanaka Apple Watch, ịnwere ike ịkwanye pọdkastị na egwu kwụ ọtọ na elekere gị.
Akụkụ m abụọ kachasị mma bụ ụdị ngwakọta, ọ bụ ọzụzụ ọrụ na ihe mmetụta obi na ya. Site na iPhone na Apple Watch, ị nwere ike ịdebe ọrụ gị ogologo ụbọchị. Nke a dị mma maka ịgba gị ume ka ị bilie elu, imegharị ma ọ bụ imegharị ahụ.
Enwere okwu na enwere ike ịtụ ma melite. Hụ mmemme gị nwere ike inyere gị aka ịbawanye ma ọ bụ dozie ebumnuche ahụike gị. M na-eji ngwa mgbatị ahụ oge niile mgbe m buliri elu ma ọ bụ na-agba ọsọ na ngwa mgbatị m dị mma maka ịdị anya ma na-enyere m aka ikpuchi njem ahụ.
Maka ebe etiti obi na-edobe m na mpaghara aka nri mgbe m na-emega ahụ. Inglaghachi na Ihe mmemme iji hụ ogologo ma ọ bụ ogologo oge ị gbara nwere ike ịgba gị ume imekwu ihe. Agbanyeghị, ọ bụ ara na elekere a nwere atụmatụ EKGor electrocardiogram.
Nke a zọpụtara ndụ site na ịchọta obi mgbawa na-adịghị agbanwe agbanwe. Inwe igwe di nma nke puru ichebe ndu gi bu ihe di nma. Ihe ọzọ nwere ike ịzọpụta gị bụ nchọpụta ọdịda.
Yabụ ọ bụrụ na merụrụ gị ahụ, ọ nwere ike ịchọ enyemaka. Ọ dị mma na echekwara ndụ ndị mmadụ tupu iji Apple Watch. E wezụga mmega ahụ, ihe m kachasị ewu ewu bụ akụkọ.
Apple Watch dị mma maka ịnweta ọkwa mgbe ịnwere ederede ma ọ bụ ozi. Nke ahụ ọ bụ ozi ederede na-ekwu UPS ga-anapụta ngwugwu ma emechaa? taa? Ma ọ bụ nwunye m, onye nwere ihe dị mkpa ịgwa m? Ọ dị mma ịnwe ike ileda ala ma hụ ihe ozi ahụ bụ na enweghị ike iwepụta ekwentị. Kedu ihe dị mma, ma e wezụga ịgụ ozi, na-enwe ike ịzaghachi ha.
N'ime ozi ị nwere nhọrọ atọ ịzaghachi, enwere okwu, enwere ederede iji dee nzaghachi, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime azịza ndị emere tupu azịza ọsọ ọsọ. Dị ka onye na-achọ ikwu okwu, enwere m mmasị ịkọwa azịza na mbụ, mana ịkọwa okwu ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Ekwadoro m ige ntị na pọdkastị na okirikiri mgbe m na-ekwupụta ya.
Enwere m ụfọdụ ozi dị iche n'ihi na m na-atụgharị olu m na olu nke pọdkastị nke ọma site na nche ahụ, mana n'ozuzu nzaghachi sitere na elekere ahụ dị ngwa ma dịkwa mfe. Ugbu a, ego maka Apple Watch bụ Apple Pay, m na-eji ego akwụ apụl na obere akpa apụl oge niile. m na-eji my starbucks kaadị akwụ ụgwọ maka kọfị ma ọ bụ dọwara kaadị akwụmụgwọ site apple akwụ na a nri ụlọ ahịa. ọma anaghị m eji ya ọtụtụ ihe na nche ma ị nwere ike iji bọtịnụ n'akụkụ n'akụkụ pịa abụọ na kaadị kredit gị ga-apụ na obere akpa gị ebe ahụ.
Kpatụ kaadị ịchọrọ, debe ya n'akụkụ onye na-agụ ya, wee pịa bido, ị mechara kwụọ ụgwọ. Apple Pay na ekwentị gị dị ngwa karịa iwepụ kaadị akwụmụgwọ. Havingnweghi iwepụta ekwentị dị ngwa karịa.
Yabụ, ihe kacha elu nke 10 kwa ụbọchị. Ọ bụrụ n’inwe Apple Watch, gịnị? Bụ ọkacha mmasị gị ojiji? Ọ bụrụ na ịnweghị, olee ụdị ụda na-atọ gị ụtọ? Ọzọ, lelee edemede a ebe a maka ilele otu ọkacha mmasị m maka AppleP HomePod. Lee gị ebe ahụ, daalụ maka ikiri.
Gịnị bụ ihe kacha mma na-echetara ngwa?
14Ihe ncheta kacha mma(s) maka ndị ọrụ iOS & gam akporo
-Me iheNchetana Oti mkpu.
Hey ihe bụ ụmụ okorobịa Dị ka ị pụrụ ịhụ, emesịrị mwubeghachi ya ma ọ na-ezukọta nke ọma na ya na ụlọ ọrụ ọhụụ m. N'ime ụbọchị ole na ole gara aga, enwere m ike ịlele ọtụtụ ihe dị iche iche na Littlestudio Rebuilding project na ndepụta m. N'ikwu okwu banyere ndepụta ime, anyị ga-ekwu maka ya n'ihi na m nwetara ọtụtụ ajụjụ gbasara ngwa ma ọ bụ ngwa ọrụ kachasị mma maka ijikwa ọrụ gị.
Na edemede nke taa achọrọ m ịgbalị ịza ajụjụ ahụ. Na iji mee nke a, aga m ekerịta ndepụta atọ m ga-eme nke m chere bụ nhọrọ kacha mma maka ọtụtụ mmadụ. Aga m agbakwunye ụdị ndụmọdụ dị egwu nke na-adabaghị na atọ ndị ọzọ mana ọ nwere ike ịba uru maka ụfọdụ ndị na-ekiri, yabụ ka anyị banye na nke ahụ.
Dịkwa mma ya mere na ọnụ ọgụgụ otu ngwa na m ndepụta na eleghị anya ị hụrụ ma ọ bụrụ na ị na-enyocha ihe onwunwe na peeji nke na m website ma ọ bụ ịjụ m banyere ya na twitter bụ Todoist n m gara mahadum na nwere a njikwa ọrụ ngwa akpọ Wunderlistand. M hụrụ ha n'anya nke ukwuu, mana afọ ole na ole gara aga Microsoft zụtara ha n'ezie ma ha kwuwa na ha ga-emecha pụọ, n'ihi nke a, m gbanwere Todoist. Na imebi isiokwu a maka gị ntakịrị, echere m na Todoist nwere ike ịbụ ngwa kachasị mma n'ebe ahụ maka atụmatụ na ike.
Ihe kachasị mkpa nke nwere ihe m hụrụ dị oke mkpa na arụ ọrụ m bụ nhazi asụsụ, nke pụtara na ị nwere ike ịrụ ọrụ yana onye ọ bụla maka Tinye nkọwa ndị dị mkpa na ọrụ ndị a, dịka: B. Tags na ụbọchị na assignees na ihe dị ka site na ịpịnye ihe ma ọ bụ kwuo ihe ị chọrọ n'ime ụlọ mmanya na-eme. Abụkwa m onye na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mgbe m jiri ngwa ahụ na desktọọpụ m ma ọ bụ na ihe nchọgharị ahụ, enwere m ike pịnye mkpụrụedemede Q ma ọ bụ nwee ike pịa bọtịnụ gbakwunyere na iPhone m ma enwere m ike ịbanye ọrụ na sekọnd, nke ahụ na-ebelata ọtụtụ ọrụ Fraị na sistem m . Gụnyere m nnukwu onye nkwado nke ijikọ ọnụ olu. Ọ nwere Siri mwekota na ya nwekwara Amazon ikwughachi mwekota.
Echegbula, Agaghị m ekwu okwu na isiokwu a. Mana ọ bụrụ na achọrọ m, enwere m ike iji Echo m gwa ya ngwa ngwa tinye ọrụ yana a ga-agbakwunye ya na igbe mbata m na akpaghị aka ma hụ m n'anya dịka m nwere ọtụtụ n'ime ndị a gburugburu ụlọ m. N'ikwu ya, ọ bụghị ihe niile zuru oke na Todoist; Echere m na ụzọ ejiri rụọ ọrụ obere ọrụ adịghị arụ ọrụ.
Adịghị m nnukwu ofufe otu ị ga - esi tinye ihe na ndepụta isi ọrụ gị kama ịnwe echiche nke ngalaba-na-ngalaba. Na mgbakwunye, ngwa Windows anaghị arụ ọrụ dịka ngwa desktọọpụ, ngwa Mac, ma ọ bụ ngwa mkpanaka. Ọ nwere interface dị iche iche na anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Na mgbakwunye, Todoist abụghị ngwa dị ọnụ ala na ọnụ ụlọ nrụpụta nkeonwe, ọkachasị ebe ọ bụ na ha megoro ọnụ ahịa na $ 4 kwa ọnwa, nke nwere ike bụrụ ihe ndọpụ uche. Okwesiri ighota, na enwere ugwo akwukwo, obu ezie na ha mere nkpebi di egwu nke icho ka ndi mmadu tinye aka na aka ahia tupu ha acho ya, mana ka o na-ebelata onu ahia rue ihe 1.50 kwa ọnwa.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ kọleji nke a bụ nhọrọ maka gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ onye na-emefu ego ma ọ bụ na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ ndebanye aha kwa ọnwa maka ngwa Ndepụta-eme, mgbe ahụ enwere ihe ọzọ ịchọrọ ịlele ma nke ahụ bụ Microsoft To-Do. Ka m chụkwute gị ebe a.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọghị ịkwụ ụgwọ maka ngwa ndepụta ma nwee mkpa dị mfe, mgbe ahụ echere m na Microsoft To-Do bụ nhọrọ kachasị mma kachasị mma n'ebe ahụ ugbu a. Agaghị m eme nkwanye a afọ ole na ole gara aga n'ihi na mgbe ọ bịara dị ka onye nnọchi maka Wunderlist, ọ na-efu ọtụtụ atụmatụ. Mana n'ime afọ ole na ole gara aga, ndị otu Microsoft nọ na-agbakwunye ọtụtụ ọrụ dị mkpa na ngwa ahụ ma hoo haa na ọ dị ezigbo mma, ọkachasị ike ịmepụta ọtụtụ ọrụ.
Nwere ike ịde koodu ndị a agba. Sub-aga-eme n'ezie na-arụ ọrụ otú ha kwesịrị, na-adịghị ka Todoist si free atụmatụ, ị nwere ike itinye ihe na faịlụ Mgbakwụnye na gị aga-eme na Microsoft-eme na-enweghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla. Nke a bụ n'ezie isi ihe mere m ji akwado Microsoft ka ọ họrọ Todoist.
Ọ bụ atụmatụ efu ma ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ụgwọ. Echere m na Todoist dị ike karịa n'ozuzu ya, mana echere m na ọtụtụ mmadụ ga-enwe ike itinye nkọwa na nkọwa na ọrụ ha, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọlite ​​igbe akwụkwọ ozi ma tinye adreesị igbe akwụkwọ ozi n'ime ọrụ ahụ, ị ga-akwụ ya ụgwọ kwụọ ndị Todoist. Ọfọn, Microsoft To-Do enweghị atụmatụ asụsụ okike ọ bụla, yabụ ị ga-edozi ụbọchị ruru gị na ihe aka gị, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị mfe, ọ na-arụ ọrụ n'ezie.
O nwekwara ihe mara mma mara mma nke ị gaghị enwe ike ịme ya na ngwa ọzọ, dị ka atụmatụ My Day, nke anaghị enweta ọrụ dabere na ụbọchị kwesịrị ekwesị, mana ị ga-ahapụ gị iji aka gị tinye ọrụ site na listi gị . N'ezie, enwere ụfọdụ ihe gbasara Microsoft To-Do nke m na-achọghị, dịka ọmụmaatụ ugbu a enweghị ngwa Mac raara onwe ya nye, yabụ dịka ịme ihe n'akụkụ Windows, ekwesịrị m iji Microsoft To-Do na ihe nchọgharị. Na mgbakwunye, dịka m kwuru na mbụ, ọ naghị adị ike dịka ngwa ndị ọzọ dị ka Todoist.
Don'tnweghị atụmatụ asụsụ okike, ị nweghị mkpado na nzacha, smartlists na ihe ndị ọzọ, mana ọzọ, ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ụgwọ ma chọọ ihe dị mfe, echere m na ọ bụ nhọrọ na-akpali akpali. Nke ahụ na-ewetara anyị nkwanye nke atọ na ndepụta a, ngwa a na-akpọ TickTick. Ma ọ bụrụ na ị jirila TickTick na mbụ, ikekwe ịmara na ọ dị ka Todoist.
Dị ka Todoist, ọ nwere ụdị asụsụ asụsụ ndị a na-enye gị ohere itinye ọrụ n'ime sistemụ gị ọsọ ọsọ ma tụlee ozi ọ bụla ịchọrọ kama ịnwe ya n'onwe gị. O nwere mkpado ị nwere ike itinye na ọrụ gị, ọ nwere ihe akpọrọ Smart Lists, nke na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka nzacha na Todoist. Ma enwere ụfọdụ atụmatụ na TickTick nke ị gaghị ahụ na Todoist.
Naanị dịka ọmụmaatụ enwere anya kalenda agbakwunye. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ọrụ gị kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa, ị nwere ike ime nke ahụ. Enwere oge mmalite ị nwere ike itinye na ọrụ gị nke mụ onwe m anaghị eji, mana ụfọdụ ndị na-ahụta ha bara ezigbo uru.
E nwere oge Pomodoro etinyere nwere ike jikọta gị na ọrụ gị, yabụ ọ bụrụ na ị nwere pomodoros na-eme ụbọchị niile ma chọọ ịkekọta ha na ọrụ ị nwere na sistemụ gị, ị nwere ike ịme nke ahụ, yana obere ọrụ rụọ ọrụ n'ụzọ ahụ dịka ha kwesiri. Click pịa ọrụ ma ị nwere ike ịhụ subtasks gị yana ozi niile metụtara ya dịka mgbakwunye faịlụ na nkọwa. N'elu nke ahụ, enwere ọbụna atụmatụ ndị ọzọ na TickTick dị ka desktọọpụ n'elu desktọọpụ nke m nwere ụdị ịhụnanya na-enweghị isi.
Amaghị m ihe kpatara m ji hụ ha n'anya nke ukwuu, mana ọ dị mma ịnwe igbe nwere ọkara ọkara na desktọọpụ m na ọrụ m niile. Na akụkụ mkpanaka, enwere atụmatụ akpọrọ Plan My Day nke ga - enyere gị aka iji amamihe mee atụmatụ ihe ịchọrọ ime n'ụbọchị enyere. Nyere atụmatụ ndị a niile na eziokwu ahụ bụ na TickTick dị ọnụ ala karịa Todoist na $ 28 kwa afọ na $ 36 kwa afọ, TickTick dị ka nhọrọ ka mma, yana maka ụfọdụ ndị ọ nwere ike ịbụ, mana enwere obere ọgba mmiri.
Maka otu, TickTick nwere atụmatụ asụsụ ndị a, mana ha esighi ike dịka ndị nọ na Todoist. Dịka ọmụmaatụ, enweghị m ike iji TOM maka echi, n'ezie m ga-ede ya niile, na mgbe m na-eji ajụjụ dị mgbagwoju anya, dị ka ọrụ nwere ụbọchị izizi akọwapụtara nke ọma yana nhọrọ a na-eme ugboro ugboro, ọ nwere ike ' t n'ezie a ga- parsed. Todoist na-ejikwa ya dịka ọkaibe, mana m ga-abanye na TickTick ma debe ụdị ihe a na aka.
N'ezie, ọ dịghị ụzọ abụọ google kalenda syncing na TickTick. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ilele Kalịnda na Kalịnda Google gị, ịgaghị eme ya nke ọma na Todoist. na ikekwe nke kachasị mkpa, atụmatụ ha na-akwụghị ụgwọ pere ezigbo mpe, ịnwere ike ịnwe ndepụta itoolu.
Nke ahụ na-ewetara anyị ntụnye m dị iche, nke na-abụghị nke ahụ dị ịtụnanya, ọ dị na mpụga mpaghara nke ngwa ngwa ụdị ndepụta dị mfe nke ọtụtụ n'ime gị maara nke ọma. Nkwado ikpeazụ m maka isiokwu a bụ ihe a na-akpọ ClickUp, ngwa nke ị nwere ike ịkọwa dị ka ngwanrọ njikwa ngwanrọ, kama ịdepụta usoro ime ihe dị mfe, gụnyere ngwaọrụ ndị anyị kwurula tupu oge a, mana gụnyere ngwaọrụ dịka Asana na Jira na ClickUp bụ ihe ka mma iji jikwaa ọrụ mgbagwoju anya nke nwere ọtụtụ akụkụ na-agagharị, ọrụ dị iche iche, ọnọdụ na njikwa otu dị ka nnukwu onye ọrụ Asauna tumadi n'ihi na enyi m Matt tinyere m na ya ma ọ bara ezigbo uru mana mgbe m gbalịsịrị ClickUp, echere m na ọ bụ eleghi anya oru kacha baa uru na nke zuru oke m gbalịrị, ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka nrụpụta onwe onye. PịaUp na-enye gị ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji lelee ọrụ gị.
Have nwere ndepụta nlele anya na ị nwere nlele bọọdụ, ọ bụ naanị ụdị Trello ma ọ bụ ụdị Kanban. You nwere ike ịnwe ele kalịnda anya ma ọ bụ ịnwere ike bụrụ onye njikwa njikwa zuru oke yana ọbụlagodi eserese Gantt. Mgbe ọ na-abịa na-eke ihe aga-eme.
Nwere nhọrọ niile. Enwere editọ ngwakọ ngwakọ zuru ezu maka nkọwa ndị na-asọ mpi na echiche ma ọ bụ asịrị. Enwere ikike ịtinye subtasks na ndepụta ndepụta, ma ị nwere ike iwepụta ndepụta ndebanye aha ndị a site na ndebiri.
N'ezie, ị nwere ike ịmepụta ọrụ niile site na ndebiri. Ma n'ezie na ị nwere oge ruru gị, oge gafere na ụbọchị nwere nhọrọ karịa ị nwere ike ịma jijiji. E nwere ọrụ nche ma ị nwere ike ọbụna ekenye otutu ndị mmadụ ple ka otu ọrụ.
Ma mgbe ahụ, e nwere ngwaọrụ. Enwere ikike iwelata ihe aga-eme na sistemụ sistemụ, nke na - enye gị ikike idowe obere ọrụ kwa ụbọchị nke ihe aga-eme, enwere ọrụ ntinye ederede nke etinyere n’ime ngwa ahụ maka ịdekọ ihe edeturu, yana ikekwe ihe mgbakwunye kachasị amasị m bụ ndọtị Chrome. dị ka ọ na-ahapụ gị were nseta ihuenyo nke ibe weebụ ma tinye ya na ọrụ dị ugbu a ma ọ bụ mepụta ọrụ ọhụụ na ya. Ma mgbe mụ na Martin na-arụ ọrụ idozi ụfọdụ chinchi na kọleji webụsaịtị bara ezigbo uru.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye chọrọ ka ijiri ezi akụkụ ọ bụla nke ndụ gị chọọ ka ị were uru ndebiri na njirimara otu ahụ, yabụ ikekwe PịaUp bụ ihe iji lelee. Mgbe m nwalere ClickUp nke ukwuu na myteam maka izu ole na ole, emesịrị m mee mkpebi ịkwaga anyị niile ịlaghachi na Todoist. Na isi ihe kpatara nke a bụ na ClickUp naanị na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ.
Anyị chọpụtara na e nwere ọtụtụ esemokwu na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ na sistemụ na ịchọpụta ebe aga. Mgbe anyị nọ na Todoist, anyị nwere ike iji atụmatụ asụsụ asụsụ ndị a wee tinye ihe na sistemụ ngwa ngwa, n'oge ule a, enwere m mmasị na atụmatụ niile dị iche iche ha na-enye ma echere m na ọ na-enye ọtụtụ mgbanwe na ike karịa ngwa ndị yiri ya. Asauna ya mere maka otu ụdị mmadụ ọ ga-abụ ezigbo ihe ga-akpali anyị Nke ahụ na-ewetara anyị ajụjụ ikpeazụ: kedụ n'ime ngwa ndị a kachasị mma? O siri ike ịza ajụjụ a nke ọma n’ihi na onye ọ bụla nwere mkpa dị iche iche, yabụ aga m enye gị ndụmọdụ ole na ole. Nke mbụ, ọ bụrụ n'ịchọghị ịkwụ ụgwọ maka sọftụwia njikwa ọrụ gị mgbe ahụ Microsoft na-eme ya n'ezie, ọ bụrụ n'ezie na ị na-eme nke ahụ Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị mfe, ịchọrọ ihe na-arụ ọrụ, ma nwee ọmarịcha atụmatụ mara mma, mgbe ahụ Microsoft To-Do dị mma.
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwụ ụgwọ dollar ole na ole kwa ọnwa maka ịdenye aha gị, ma ọ dịkarịa ala Todoist bang maka ego m, bụ ngwa njikwa ọrụ kachasị mma maka ọtụtụ mmadụ. Ugbu a, TickTick bụ n'ezie kwenye. Ọ dị mma nke ukwuu ma nwekwaa atụmatụ ole na ole dịka nke a oge Pomodoro, mana opekata mpe nhazi asụsụ okike kachasị elu nke na-enye m ohere ị nweta ọrụ n'ime sistemụ m nke ọma na ngwa ngwa na-enye Todoist uru.
N'agbanyeghị ọrụ Task Manager ị kwụsịrị ịrụ ọrụ, otu n'ime ọrụ ị ga-etinye na ya ma mee ya asap bụ ị nweta onwe gị ngalaba aha. Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-adabere na ịntanetị ịchọta ndị na-achọ ọrụ ha. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado onwe gị dịka onye kachasị mma maka ọrụ ị na-achọ, mgbe ahụ ị kwesịrị ịmalite ileba anya na ịdepụta akara ngosi nke onwe gị n'ịntanetị.
Otu akụkụ dị mkpa nke usoro ahụ bụ iwulite websaịtị ebe ị ga-ekwupụta nka gị, gosipụta pọtụfoliyo gị, ma mee ka ọ dị mfe maka ndị mmadụ ịkpọtụrụ gị. Nzọụkwụ mbụ ị ga - eme bụ ịmebe aha ngalaba maka onwe gị, ihe ị nwere ike ijikọ na profaịlụ gị n'ịntanetị ma gbakwunye mmalite gị na kaadị azụmaahịa. Ebe kachasị mma na ịntanetị iji nweta aha ngalaba ahụ sitere na hover.
N'adịghị ka ụfọdụ ebe ndị ọzọ, Hover na-eme usoro nke ị nweta ngalaba aha dịka ọ dị mfe. N'ezie, m zụtara otu n'ụtụtụ a ma usoro ahụ erughị 30 sekọnd. Enweghi mkpasu iwe na-ewe iwe, ọ nweghị ihe na-eguzo n'ụzọ gị naanị iji mee ka usoro ndenye ọfụma dị mfe ma kwalite.
Gụnyere ihe karịrị 400 dị iche iche na ngalaba mgbakwunye ịhọrọ site na kpochapụwo .coms na.mes, naanị ole na ole na-adọrọ mmasị dị ka .lol na .ninja.
Have nwere a oke nhọrọ. Ma ozugbo ị nwere ngalaba aha, ị nwere ike ịtọlite ​​ọkachamara na adreesị ozi-e gị maka ya, ma ọ bụ jiri njirimara njikọta ha jikọọ ha na ndị na-ewu weebụsaịtị dị ka Squarespace na Shopify. Gaa hover.com/thomasfrank iji nweta aha ngalaba gị tupu onye ọ bụla emee.
Ma ọ bụrụ na ị jiri njikọ a gị, na nkọwa dị n'okpuru ebe a, ị ga-ahụkwa mbelata 10% na nzụta mbụ gị. Ọtụtụ na-ekele Hover maka ịkwado isiokwu a ma na-akwado ọwa m yana, dị ka mgbe niile, ekele maka ikiri isiokwu a, pịa bọtịnụ yiri ya ma ị nwere ike ịdenye aha ebe ahụ iji nata isiokwu ọhụrụ kwa izu, mgbe ha pụtara, ma ọ bụ pịa ebe ahụ maka otu akwụkwọ m How To Get Better Grades For Free. Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ịchọghị ịpị igbe ndị a, ị nwere ike iso m na Instagram @tomfrankly ma ọ bụ aka nri ebe a pịa ka ịhụ isiokwu ọzọ na ọwa a.
Daalụ maka ikiri na m ga-ahụ gị ọzọ.
Kedu ka esi echetara ndị agadi ka ha rie?
Dementia na nri: ndụmọdụ 13 iji jide n'aka na agadi dịna-eri nriezu
Mee ka nri dị mfe ịhụ.
Tinye agba na nri.
Meena-eri nriihe omume mmekọrịta.
Tinye aka pụrụ iche.
Gbalịa ire ụtọ.
Mee ka nri rie oke.
gịnị bụ v ups
nne m sara ya ubochi obula ma oburu na echetaghi ya o juo aru ma oburu mgbe m gbaliri inyere ya aka na igba ya ume ka o saa anya, mu na ya arumaru ma wegha ya egwu mmiri ka obu gini ka m ga eme? 8 elekere oge maka igwe mmiri gi oh achoghi m, achoghi m mama, bia biko, anyi agabigala ugboro ugboro, lee bia, o di izu uka kamgbe onye ikpe azu gi Achọrọ biko biko yipụ uwe gị onye nwere isi mgbaka ga-ajụkarị ịla ezumike nká ma ọ bụ see okwu n'ịsa ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ, mgbe ị na-enyere mmadụ aka ịsa ahụ, ọ dị mkpa inwe mmetụta dị nro na iji akọ na ịkwanyere ugwu ugwu ha ùgwù, mana ị hụrụ spa n'anya na-eme ka ị nwee mmetụta dị ka eze nwanyị, ee na mgbe anyị ga-aga ụlọ oriri na ọ favoriteụ favoriteụ kachasị amasị gị maka nri ehihie o bọtịnụ elu wee nwee ike inyere aka nke ọma ọ dị mma ezigbo ọrụ momokay mama m wụsara obere mmiri na mkpịsị ụkwụ gị m ga-anwale ya, ka anyị hụ ma ọ dị mma i st kedu ihe na-eche mmm ọ dị mma ugbu a ka anyị sachaa ebe ahụ ị nwere ike ịme nke a n'onwe gị ị maara sweetok ay we m emechaala m gbanye mgbali mmiri a ka o di ala ma juo mmiri a ma m ga-ebiliri gi, kanodu ebe a, odimkpuru isi gi azu m gha awusa gi obere mmiri. jiri shampoo ọkacha mmasị gị nke na-esi ísì ụtọ na-amasị mm-hmmm, mesie onye ị hụrụ n'anya obi ike na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịsa ahụ bụ ọrụ aka gị, ị nwere obi ụtọ inyere aka, jụọ mmetụta ọ na-enwe na otu ọ ga-esi amasị ịme ihe. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara otu ị ga - esi nyere onye ị hụrụ n'anya aka ịsa ahụ, gbanwee oge maka oge, ọ bụrụ na onye ị hụrụ n'anya achọghị ịsa ahụ n'ụtụtụ nwalee oge dị iche nke ụbọchị ma ọ bụrụ na okwu ịsa ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ na - akpata ụjọ , jiri okwu dị iche dị ka spa ma ọ bụ ha ga-ehicha gị vkpọ ụlọ ịsa ahụ site na iji mmiri na-enwu enwu Ma ọ bụ aromatherapy ma ọ bụ egwu na-akụda mmụọ, ọ dị mkpa na onye ị hụrụ n'anya nwere ahụ iru ala. Gbakwunye aka na iji oche ịsa ahụ.
Debe ịsa ahụ ugboro abụọ n'izu, yana ịsa ahụ na etiti. Mee ka ha mata ihe ị ga - eme, nke ukwu, na oge ọ bụla enwere ike, gwa ha ka ha nyere gị aka imechi akwa maka inyokwudo oge ị na - enweghị. Tụlee ịwụnye aka aka
Enwere m ike ịzụ onwe m iri obere?
Iri ole na olecalorie apụtaghị na agụụ na-agụ gị. N'ezie, enwere ọtụtụ ihe ịnwere ike imeiji mee ka agụụ kwụsị. Gbalịa jiri ihe ndị ọzọ mejupụta akụkụ gị ụfọdụ,na-eri nrinwekwuo protein ma ọ bụ ghọgbuo uche gị site na iji obere efere. Atụmatụ ndị a dị mfenwere ikeenyere gị aka ịchịkwa akụkụ nri na-enweghị agụụ.Mar 20 2017
Apple Watch ọ na-echetara gị ka ị jee ije?
Oge a “OgeNa-eje ije”Atụmatụ yiri nke“ Oge Iguzo ”ihe nchetanaApple Watchnana-echetaraọrụ na-ebili najee ijentakịrị otu ugboro kwa awa.6 ag. 2021
Kedụ ka m ga - esi ghọgbuo Apple Watch?
Igha ihu na ogwe aka gi na azu
Otu ụzọto'hack'theGuzosiemgbanaka bụ siteguzoelu na mgbe ahụ na-agbanye ogwe aka abụọ n'ihu azụ banyere oge 15-20. Site n'ime nke a, gịGuzosie ikemaka awa ọ bụla ga-emechi oge ọ bụla.
Ndi Todoist enwere n'efu?
Onye isi alabụ kpam kpamn'efuiji. Mgbe ị chọrọ oke oru ngo ókè ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ dị ka ihe ncheta, ị nwere ike mgbe niile nweta nkwalite na Pro ma ọ bụ Business atụmatụ.
Gịnị bụ ngwa kachasị mma maka ịme ndepụta?
Onye isi ala. Site na ezigbo UI,ngwamaka usoro ikpo okwu ọ bụla, yana nkwado nkwado, Todoist bụ ọnụọgụ otu-eme ndepụta ngwana onye mmeri doro anya nke ndị editọ.
Gịnị mere ndị agadi anaghị eri nri?
Debụ onye akpịrị ịkpọ nkụ nwere ike ịkpata agụụ. Ọtụtụndị okenye anaghị eme yanweta mmiri ọ enoughụ andụ zuru oke ma ghọọ ndị akpịrị na-akpọ nkụ n'ụzọ dị mfe karị n'ihi mgbanwe mgbanwe afọ ma ọ bụ ọgwụ ndị ha na-a .ụ. Intobanye na usoro ị na-eme kwa ụbọchị ebe a na-eri nri n'otu oge kwa ụbọchị nwere ike inyere ahụ ha aka ịdị njikererien'oge ndị ahụ.
Kedu ngwa kacha mma maka ihe ncheta nri?
EatWise bụ ihe ncheta nri kacha mma App. A na-eche ya nke ọma ma nwee ọrụ niile iji nyere gị aka ịga nke ọma na njem gị. Anyị na-echeta si n'ubu gị! 1. Tọọ ole nri ị ga-achọ iri 2. Debe oge ị chọrọ n'etiti nri ọ bụla. 3.
Enwere ngwa na-agwa gị ụdị nri ị kwesịrị iri?
Rie Ukwuu a bụ onye na-eme nri na-agbanwe agbanwe. Dabere na ebumnuche nri gị, mmefu ego gị na oge ị nwere ike esi nri, ngwa a na-egosi ihe ị kwesịrị iri. O nwedịrị ike ịmepụta ihe oriri na-adabere na nri nri gị na izu.
Enwere ngwa ga-echetara gị ihe?
Nwere ike ịmepụta ihe ncheta nke ihe niile ị chọrọ ka a na-echetara ya na ọ ga-egosipụta nke ọma na desktọọpụ gị na kalenda. Nke a na - enye gị ohere inweta nnụnnụ anya nnụnụ ihe dị na efere gị maka ụbọchị / izu. A na-ewu kalenda ahụ n'onwe ya site na iji usoro iCal a ma ama nke usoro ọtụtụ kalịnda ndị ọzọ na-akwado.